एमालेमा खैलाबैला,ओलीसहित एमालेका ९१ सांसदलाई निष्कासन ! – Points Nepal
एमालेमा खैलाबैला,ओलीसहित एमालेका ९१ सांसदलाई निष्कासन !
प्रकाशित मिति: बिहिबार, माघ १३, २०७८ समय: १७:४०:५४
२ पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि पुनःस्थापना भयो तर, प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद निरन्तर अवरोध गरेको ४ महीना पुग्न लाग्यो ।
२३ भदौ २०७८ देखि ११ कात्तिकसम्मको ५१ दिन चलेको अधिवेशनको पूरै अवधि सँगै २८ मंसीरबाट शुरु भएको चालू अधिवेशन पनि एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ । यति लामो समय एमालेकै कारण संसद चल्न सकेको छैन । यसको एउटै कारण हो९ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार ।
एमाले फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षीले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आएको छ । एमाले सांसदहरुले नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुलाई ‘गैरसांसद’ को संज्ञा दिंदै आएका छन् । उनीहरुले संसदमा लगाउने नारा हो, ‘गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर १’
१ पुस २०७८ मा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठक बस्यो । सरकारका तर्फबाट बैठकमा उपस्थित थिइन्– शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री । झाँक्री नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद पनि हुन् ।
उनको उपस्थितिलाई लिएर एमालेका कुनै सांसदले कुनै कोणबाट कुरा उठाएनन् । झाँक्रीले पनि एमाले सांसदहरुको कुरा सुनिन् । दुवैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेरै छलफलमा सहभागी भए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइमा चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमाले चरित्र संसदीय मर्यादा विपरीत हो । ‘उसले जे भन्यो त्यही हुनलाई एमालेको पेवा हो र संसद रु’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभाको बैठक शुरु हुने बित्तिकै एमालेका सांसदहरू वेल घेर्न पुग्छन् र नारा लगाउँछन्, ‘सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद । गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर ।’
‘एमालेलाई माधव नेपाल सिंहदरबारमा स्वीकार बानेश्वरमा अस्वीकार किन रु भन्ने प्रश्नमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘मिनी संसदमा कसले के भन्यो र के निर्णय भयो भन्ने कुराले स्वीकार गरेकोरनगरेको भन्ने हुँदैन । एमालेले उहाँहरूको छुट्टै पार्टी भनेर कतै पनि स्वीकार गरेको छैन ।’
सभामुखले र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको पटक९पटकको सर्वदलीय बैठकमा एमाले सहभागी नहुनुको कारण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई पार्टी मान्न नसकिएकाले हो भन्न हिच्किचाउँदैनन् प्रमुख सचेतक भट्टराई ।
एकीकृत समाजवादीलाई चुनावअघि नस्वीकार्ने र संसद चल्न नदिने भट्टराईले संकेत गरे । भन्छन्, ‘आगामी चुनावपछिको कुरा अर्कै हो, तर अहिलेलाई उहाँहरूको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकिन्न ।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘आगामी चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन सक्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सार यही नै भएको भट्टराईको प्रष्टीकरण छ । १० पुस २०७८ मा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘आगामी चुनावअघिसम्म संसद अवरोध गर्ने’ बताएका थिए ।
माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता नहुँदै गत भदौमा एमालेले १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो । तर सभामुखले त्यसलाई मान्यता नदिएको विरोधमा एमालेले २३ भदौ २०७८ देखि लगातार संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
गैरसंसदीय अभ्यासस् एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूलाई मिनी संसदमा स्वीकार्ने, तंसदमा अवरोध गर्ने एमालेको द्वैध चरित्र भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा चुनावसम्मै संसद अवरोध जारी रहन्छ भन्ने एमाले चरित्र संसदीय मर्यादा विपरीत हो । ‘उसले जे भन्यो त्यही हुनलाई एमालेको पेवा हो र संसद रु’ संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘संसदलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि एमाले जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल एमाले जसरी पनि संसद विघटन सही थियो र पुनर्स्थापना गलत थियो भन्ने देखाउने ध्याउन्नमा रहेको बताउँछन् । मिनी संसदमा जाने तर, संसदमा अवरोध गर्ने एमाले चरित्र सांसदहरूको भत्ता र सेवा सुविधासँग पनि जोडिएको बताउँछन् ।
भन्छन्, ‘संसदीय विषयगत समितिमा गएर नारा लगाउने कुरा भएन । बैठकमै नगए भत्ता आउँदैन । संसदमा त गएर हाजिर लगायो, नाराबाजी ग¥यो, भत्ता पाकिहाल्छ ।’
संसद अवरोध गर्ने सांसदहरुलाई पदमुक्त गर्नुपर्छः बाबुराम भट्टराई स् पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले भने संसद अवरोध गरिरहेका एमाले सांसदलाई सभामुखले कारवाह िगर्नुपर्ने बताएका छन् ।
एमाले सांसदहरुमा कुनै नैतिकता नहेको र भत्ता खाएर संसद अवरोध गरिरहेको उनले बताए । संसदमा आफ्ना कुरा एमालेले राख्न सक्ने तर अवरोधको कुनै अर्थ नरहेको उनले बताए । https://compaqnews.com/? बाट साभार गरीएको हो ।
Last Updated on: January 27th, 2022 at 5:41 pm